Farqiga u Dhaxeeyo Aqqoonyahaanka Iyo Qofka Jaahilka Ah -Tukesomalism.com - Diblomaasi
Farqiga u Dhaxeeyo Aqqoonyahaanka Iyo Qofka Jaahilka Ah -Tukesomalism.com
Jaahilka saddex baa lagu gartaa:
1) Isla wayni iyo isqaad qaad iyo inuu isagu is qanciyo.
2) Hadal badnaan aan faa’iido lahayn oo uu isku dabaqo markasta.
3) Wuxu dadka udido oo uu isagu falo macnaha wax kastoo isagu nah yi yay ama uu dadka kula yaabo oo uu isaguna sameeyo.
Saddexdaas iyo wixii kale lamida waa calaamadaha jaahilka lagu garto hadaba jaahil nimadu waa
qayb kamida curyaanimada dhanka maskax da ah oo uuna xataa qofku is ogayn.
Qof ka cilmiga leh isagoo dhintay buu nool yahay waayo waxkastoo uu katagay ama uudadka ufaa iideeyay ayaa wali dunida kashaqeeya oo la odhanayaa hebal baa saasyidhi.
Midka jaa hil ka ahina isa goo nool buu dhin tay waayo cid og iyo meel laga yaqaano midna majirto hadii xataa labarto lagu baran maayo fiicnaan iyo aqoon iyo faa iida toona.
Qofwayn oon aan cilmi lahayn waxaa ka wayn:- qofyar oo cilmile, waayo marka goob ama meel la isugu yimaado qofkii cilmilaa kaca oo dadka wacdi ama taariikh ama hadba arinka markaa meesha looga baa han yahay waxaa soo jeedin midka yar ee wax garadka ah midka wayna wuu dhagaystaa.
Mida kale qof marya xun xun oo cawradiisa marba la arko iyo qof jaahil ah waxba isma dhaamaan sababtuna waxay Tahay meela badan buu ku ceeboobaa jaahilku oo isagoo su’aalo la iswaydiinayo ayuu garan waayaa dadkuna waylayaabaan ama isagoo markasta wax uuna aqoon u lahayn ku hadlayaa ladhahaa jaahiloow saas maahee ka joog laakiin waa saas iyo saas marka waa uu yax yaxaa…
Qof kii caqli leh waa qof silis da hab ah xidhan. Midka cilmiga lihina waa mid taaj wata, jaahilku waa sidii qofdhiman ama ciyaal ah laakiin qofka aqqoonta leh waa qofwayn oo quman.
Jaahilku marku jana ubaahdo iyo markuu aduunyo ubaahdo labada jeerba naftiisuu dilaa isagoo galaafta in kale!
Cudurka jahliga dawadiisu waa cilmiga oo la barto waxaa hore loo yiri ”cilmiga hala guudhigee caqliga kaasho … garasha la’aan ta jawaabteedu waa su’aasha”. Qoontu waxay dhisi kartaa guri aan tiirar lahayn, laakiin jahligu wuxuu dumiyaa guri tiirarle oo sharaxan.
Related Topics:Farqiga u Dhaxeeyo Aqqoonyahaanka Iyo Qofka Jaahilka -Tukesomalism.com
Qeybtii 3aad: Saaxiibtinimadii Shalay Saakay Halkay Maraysaa? -Tukesomalism.com
Xagee Ku Lumisaa Wakhtigaada Qaaliga Ah?
Waa abwaan ka tirsan Somalism. Wuxuu wax ka qoraa hidaha iyo dhaqanka, hal abuurka, hadalka san iyo waliba wuxuu wax ka qoraa waayo aragnimada nolosha. Qoraaga wuxuu cilmi gaar ah u leeyahay hidaha iyo dhaqanka, waliba hal abuurka ku salaysan dhaqamada Soomaaliyeed. Qoraaga wuxuu soo maray dugsiga hoose iyo dhexe. Qoraaga waa qoraa aad u jecel dadka iyo dalka Soomalaiyeed.
Bariga dhexe17 hours ago